<!-- vim: se ft=wp: -->Mpandraharaha ara-toe-karena malagasy '''Razoarimihaja'''. Vao haingana no nitondrany io anarana hoe Razoarimihaja io. Olona be volom-bava hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladia izy taloha. Ny taona 2002, raha nisy ny fiadiana izay ho tompon'ny pô misolitika teto [[Madagasikara]], dia natao hazalambo izy satria tamin'izany no niseho ilay ohabolana hoe "Na gidroko na gidron'olona, rehefa be volom-bava dia mpampihorohoro". Tsy sahy niseho vahoaka izy noho izany ka nitady izay fomba rehetra hanesorany ny volom-bavany. Tany am-piafenana tany izy no nahita hevitra hamorona '''rasoir''' mba hanalam-bolom-bava. Rehefa nahita azy avy niharatra ny zanany vavy dia niteny hoe : "Izao koa i bainina mba '''mihaja''' koa". Teo no namoronany orinasa mpanao rasoir, ary ny rasoir novokarin'io orinasa io dia nataony hoe '''Rasoir Mihaja'''. Ireo mpiasan'ny orinasa no miantso azy hoe "Ramose Rasoir Mihaja" ka izay no nahatonga ny anarany hoe "Razoarimihaja". Tsy mbola vita tanteraka anefa ny fiharatany tamin'io fotoana nahitan'ny zanany vavy azy io fa vao ny tapany ambony amin'ny vavany fotsiny no voaharatra. Nanapa-kevitra ny lehilahy fa hajanony hatreo ny fiharatana, ka izany no nahatonga ny volom-bavany ambany ho hita eny mandraka androany. Marihina fa tsy havany akory ireo antsoina hoe Rasoir BIC sy Gilette sy ny hafa koa [http://www.top5optimizers.com optimize windows xp]. I RAZOARIMIHAJA dia mpangala-badin'olona sady mpanao ankeriny vehivavy. efa nisy maromaro no tratrany tamin'izany ary efa maro ireo nijoro ho vavolombelona manoloana iznay fomba ratsiny izany. Nisy ihany koa anefa ireo notambatambazany tamin'ny vola ka nanaiky tsy fidiny noho ny tsy fisiana sy fahantrana angamba Izy dia miseho ho mpivavavaka hatramin'ny fahazazany na dia manana izany toetra ratsy izany aza. [[Category:Politika]]